घर डुबानमा परेपछि नगरपालिकामा तालाबन्दी — donnews.com
१नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैन, हामी भोलि भेट्दैछौं- अध्यक्ष श्रेष्ठ
२सुर्खेतको कट्कुवा सामुदायिक वनमा बम विस्फोट, दुई जना घाइते
३फाइजर खोप नेपालमा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लगाइने
४मुगु बस दुर्घटना- मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक लाख दिने
५महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत नारायण शर्माले दिए लेखा शाखाका कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की
६लमसुङ पहिरोको जोखिममा, पूरै वडा अन्धकारमा
७देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, तीन प्रदेशमा वर्षा
८एकीकृत समाजवादीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा अम्मरबहादुर थापा
९आज मुलुकभरका वडामा एमाले अधिवेशन हुँदै
१०मुख्यमन्त्री राउतले बिज्ञप्ति नै निकालेर जिउँदो पत्रकारलाई श्रद्धाञ्जली दिएपछि…….!
११लुम्बिनीमा सरकार निकटका मिडियालाई बजेट बाँडेको भन्दै विरोध
१२एकाएक किन रोकियो काँग्रेस महाधिवेशन ? सिंगो केन्द्रीय समिति नै खिलापमा
घर डुबानमा परेपछि नगरपालिकामा तालाबन्दी
नवलपुर, १४ भदौ । स्थानीयवासीले गैँडाकोट नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । बुधबार रातिदेखि परेको बर्सातले आफ्ना घर डुबानमा पर्दा पनि जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको जनाउँदै उनीहरुले आइतबार तालाबन्दी गरिदिएका हुन् ।
अविरल वर्षाका कारण नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) गैँडाकोट–४ मा २०० भन्दा बढी घर डुबानमा परेको थियो । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी गरेर स्थानीयवासीले स्थानीय सरकारले जनतालाई डुबानबाट मुक्ति दिन नसकेको जनाउँदै पानीको निकास दिन आफूहरुले नै काम गर्ने बताएका छन् । गैँडाकोट–४ का तीर्थ पौडेलले निरन्तर परेको पानीका कारण घर डुबानमा परेपछि घरमा खान, बस्न, सुत्न समस्या हुँदा समेत स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । अव्यवस्थितरुपमा बस्ती बसाइएको र पानीको निकास नगरिँदा आफ्नो घर तथा पसल डुबानमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको राजमार्गको उत्तरतर्फ पर्ने गैँडाकोट–४ मा घर तथा पसल डुबानमा परेका हुन् । उहाँका अनुसार डुबानका कारण स्थानीयवासीका लाखौँ रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको छ । आफूहरुलाई बर्खे पानीको निकास चाहिएको रे जनप्रतिनिधिले निकासमा वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पानी निकासका लागि नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई देखाउने वडा कार्यालयले नसक्ने भनेपछि स्थानीय रुष्ट भएका स्थानीयवासी अमिन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अधिकांश एक तले घर डुबानमा परेपछि खाना बस्नका साथै शौचालय जान पनि नसकिने अवस्था रहेको छ । यस क्षेत्रमा बर्खाको बेलामा प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिने गरेको भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान भने हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
गैँडाकोट–४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले वडाले मात्रै निकास दिन नसक्ने भएकाले सबैको समन्वयमा मात्र काम गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले सो स्थानमा बर्सेनि समस्या दोहोरिने गरेको र अस्थायी रुपमा भए पनि पानीको निकास गरिने बताउनुभयो । “जेसिभी लगेर नाला निर्माण गरेर अस्थायी रुपमै भए पनि पानीको निकास गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो ठाउँमा सडक विस्तारको काम भइरहेकाले पनि पानीको उचितरुपमा निकास गर्न सकेका छैनौँ ।”
जेसिभीलगायतका उपकरणको प्रयोग गरी नगरभित्र जमेको पानीलाई नारायणी नदीतर्फ निकास गर्ने काम तुरुन्त सुरु गरिहाल्ने नगर प्रमुखपौडेलले बताउनुभयो । अस्थायीरुपमै भए पनि जमेको पानी हटाउनतर्फ नगरपालिकाको पहल रहने उहाँको भनाइ छ ।
सुर्खेतको कट्कुवा सामुदायिक वनमा बम विस्फोट, दुई जना घाइते
फाइजर खोप नेपालमा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लगाइने
मुगु बस दुर्घटना- मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक लाख दिने
देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, तीन प्रदेशमा वर्षा
मुख्यमन्त्री राउतले बिज्ञप्ति नै निकालेर जिउँदो पत्रकारलाई श्रद्धाञ्जली दिएपछि…….!
थप ७०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ११ को मृत्यु
‘बाढी र डुबानको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ’ : प्रम देउवा